Arday Somaliyeed oo ku xaniban Magaaladda Makeli & dagaalka Itoobiya iyo TPLF oo sii xoogaystay – Radio Daljir
Arday Somaliyeed oo ku xaniban Magaaladda Makeli & dagaalka Itoobiya iyo TPLF oo sii xoogaystay
Nofeembar 27, 2020 3:50 b 0
Maxamed Shoonbe oo kamid ahaa ardayda wax ka barata dalka Itoobiya siiba magaaladda Makela oo gobalka Tigreega ayaa ka hadlay dhiibaatada hayasta Ardayda Makela wax ka bartaa.
Shoonbe ayaa sheegay in isaga shaqsi ahaantiisa uu kamid ahaa ardaydii wax ka baratay dalkaas ee ka soo tagay xiligi Karoonaha ,isagoo sheegay in wali arday farabadan ay ku xayiranyihiin magaaladda Makela.
tiro arday ah ayuu sheegay Maxamed inay wax ka bartaan dalkaas itoobiya siiba gobaladda tigreega,ayna hadda socdaan dadaadalo lagu doonayo sidii ardaydaas dalkooda dib loogu soo celin lahaa.
Dalka Itoobiya wali waxaa ka socda dagaaladda u dhaxeeya Dowladda Itoobiyaha iyo xogaaga Tigreega oo dagaalkoodu waji cusub yeeshay kadib markii ay ka horyimadeen baaqyo loogu soo jeedinayo inay TPLF isku soo dhiibaan dowladda.
Dowladda Itoobiya ayaa diiday dhinaceeda baaqyo caalami ah oo ku aadan in colaada ay wadahadal ku soo afjarto,iyaddo shacabka gobalka Tigreega intiisa baddan ay ka gudbeen xuduudka ay la wadaagan Dalalka Sudan & Eriteria.
Dowladda Federaalka oo bilowday baaris la xiriirta musuq-maasuqa
Garoowe: Fursad Shaqo IOM- IT Advisor